ဝ အာဏာပိုင်က ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သည့် ရဲတပ်သား ၂ ဦး- နအဖကတော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ဝ အာဏာပိုင်က ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သည့် ရဲတပ်သား ၂ ဦး- နအဖကတော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ပြီ
ဝ အာဏာပိုင်က ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သည့် ရဲတပ်သား ၂ ဦး- နအဖကတော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ပြီ
ဝ နယ်အတွင်း ၀င်ရောက်ထောက်လှမ်းသည့် သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းယန်းအခြေစိုက်ပုလိပ်အား ဝ အာဏာပိုင်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
“အဲဒီလူတွေကိုမသင်္ကာဘူး၊ ဝ တပ်စခန်းတွေကိုလိုက်မေးတယ်၊ ဟိုစပ်စုဒီစပ်စုလုပ်တော့ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ ဝ အာဏာပိုင် တွေက ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးတယ်၊ မိုင်းယန်းကပုလိပ်မှန်းသေချာတော့ ၀ စစ်တပ်ဆီကို ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် က အပ်နှံလိုက်ပြီလို့သိရတယ်” – ဟု တရုတ်နယ်စပ်နေထိုင်သူ သျှမ်းအမျိုးသား တဦးကပြောပါသည်။
ဝ အာဏာပိုင်က ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်သည့် ရဲတပ်သား ၂ ဦးအနက် တဦးမှာ ကျိုင်းတုံဇာတိ သျှမ်းအမျိုးသားဖြစ် ပြီး ကျန်တဦးမှာ စိုင်းကျော်အမည်ရှိ ဝ အမျိုးသားတဦးဖြစ်သည်ဟု မိုင်းဖျဲန်ဒေသခံတဦးကပြောပါသည်။
ဝ တပ်ဖွဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ အဆိုပါ ရဲသားနှစ်ဦးသည် နအဖ စစ်တပ်စေခိုင်းချက်အရ ဝ တပ်ဖွဲ့တပ် စခန်း တည်နေရာ၊ အင်အားတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေ နှင့် ၂၀၀၉ နှစ်လည်ပိုင်းက ဝ နယ်အတွင်းပျောက်သွား သည့် ဗမာ့တပ်မတော်သား ၂ ဦး၏သတင်း လိုက်လံစုံစမ်းရန် ဝ နယ်အတွင်းဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထွက်ဆို ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါဒေသခံကပြောပါသည်။
“အခုသူတို့ ၂ ယောက်ကို မိုင်းပေါက် ဝ တပ်ဖွဲ့က ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ဌာနချုပ်ကို ပို့မလား၊ ဘာလုပ်မလဲတော့မသိဘူး” – ဝ အာဏာပိုင် နှင့် နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောပါသည်။
၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းကလည်း မိုင်းခတ်အခြေစိုက် ခမရ ၃၂၇ မှ လက်နက်အပြည့်တပ်ဆင်ထားသည့် အင်အား ၆ယောက် ပါအဖွဲ့ တဖွဲ့ ဝ ထိန်းချုပ် နယ်မြေသို့ ကျွံဝင်ခဲ့သော်လည်း ဝ တပ်ဖွဲ့က တစုံတရာအရေးမယူဘဲ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက် သည်။
၂၀၁၀ မေလဆန်းပိုင်း လားရှိူးတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သန်းထွဋ်က ဝ တပ်ဖွဲ့ဥက္ကဌပေါက်ယူချမ်းအားတွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ခေါ် ခဲ့သော်လည်း ဝ တပ်ဖွဲ့ငြင်းဆန်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ကနေ့တိုင် ထပ်မံကမ်းလှမ်းခြင်း တစုံတရာမရှိခဲ့ပေ။
“အခုလိုမျိုး နအဖနဲ့အေးအေးကျဲကျဲမနေဖို့၊ ကချင် တပ်ဖွဲ့လို မကြာခဏ၀င်ထွက်ဆွေးဖို့လိုတယ်၊ အပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တာ မဆောင်တာအပထား နှစ်ဘက်စလုံးသွားလာဝင်ထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်” – ဟု တရုတ်အာဏာပိုင် များက ပြောဆိုတိုက်တွန်းထားကြောင်း နယ်စပ်နေအဆိုပါသျှမ်းအမျိုးသားက ပြောပါသည်။
Whatever may be, this is our land( Myanmar), not Wa land. Wa state is under the jurisdiction of Government Of Myanmar! They(Wa) have no authority to arrest like that! One nation should have one army! Be said truth Wa ethnic group is not our nationality,they all are chinese,they use chinese literature, they use chinese communist style, they speak chinese, their money are in china banks, they look like small chinese civilian(country) in Myanmar!
I said this becoz we should love our country, i am not from military side, i dont like them, but i am Myanmar! I strongly against all the ethnic army. They can beathreat to our union, our land!